လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ - Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်း
Yonaguni ၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကလူ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုသက်သေပြခဲ့သည်။
Lသူ Yonaguni အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး (与那国島海底地形 / 遺跡, Yonaguni-jima kaitei chikei / iseki? စာသား "ရေအောက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း / Yonaguni-jima ၏အကြွင်းအကျန်") ကရေငုပ်ခရီးစဉ်အော်ပရေတာများက 1985 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ရေအောက် Kihachiro Aratake သည်ဂျပန် Ry southernkyūကျွန်းစုရှိ Yonaguni ကျွန်း၏တောင်ဘက်စွန်းရှိ Arakawa Point ၏ရှင်းလင်းသောရေတွင်ရှိသည်။ ထုထည်ကြီးမားသောကျောက်တုံးဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ကြီးမားသောထောင့်ချိုးများနှင့်အလွန်ကြီးမားသောနံရံများအားချောချောမွေ့မွေ့ပြန့်နှံ့သောကြီးမားသောလှေကားထစ်များရှိသည်။ ၇၅ မီတာနှင့်အမြင့် ၂၅ မီတာရှိသည်။ မီဒီယာများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားအစီရင်ခံရန်အနည်းဆုံးဆယ်နှစ်ခန့်ကြာမည်။
လေ့လာရေးသိပ္ပံပညာရှင်များယခုမြေကြီးတပြင် 4.6 ဘီလီယံအထိနှစ်ပေါင်းအဲဒီမှာမွေးဖွားကြောင်းခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ prehuman မျောက်ဝံများအဆိုပါရေခဲပြင်ခေတ်ဆိုလိုသည်မှာအကြောင်းကို 1.8 နှစ်ပေါင်းသန်းရှိပါတယ်, Cenozoic ၏ Quaternary, ကာလကို Pleistocene ခေတ်ရှေ့တော်မှာမျက်နှာပြခဲ့ပါဘူး။ ကကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၏လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး အကယ်. အချို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကနောက်ဆုံးအသက်ကျဆင်းမှုနှင့်အဆုံးကာလအတွင်း 12000 နှစ်ပေါင်းအနီးအရပ်၌ Holocene မတိုင်မီပေါ်ထွက်လာမယုံကြည် glacial ။ ဒါကြောင့်လာမယ့် 7000 နှစ်ပေါင်းဤကောက်ပဲသီးနှံများကိုပုံကိုပိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့နှင့်ကျောက်ခေတ်ထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ကြပေသည်။ အရေးအသားနှင့်သင်္ကေတ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်း 5000 နှစ်အနီးကပ်ရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပေါ်ထွန်းသောပါပြီ။ ဒါဟာသမိုင်းမကာလအဖြစ်ထိုကာလမတိုင်မီခေတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အံ့အားသင့်ဖို့, သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပိုပြီးသမိုင်းမရှေးဟောင်းပစ္စည်းဤအမြင်ကိုစိန်ခေါ်နေကြသည်။ ဤအရေအောက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏ဗိသုကာပညာသားပါဗိသုကာနှင့်အနုပညာအသိပညာခဲ့ပေမယ့်လည်းအဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုလက္ခဏာများပြသသာ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အရေးအသား၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနှင့်ပိရမစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိနည်းပညာကဒီဧရိယာ 10,000 နှစ်သို့မဟုတ်ကပိုကတည်းကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါဟာရှည် Neolithic ကာလမတိုင်မီ, ဒီအဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမကြိမ်အတွင်းတည်ရှိကြောင်း, အရှင်ရှင်းပါတယ်။
သမုဒ္ဒရာအောက်တွင်နစ်မြုပ်နေသောမြို့တစ်မြို့ - ဂျပန်ရှိယိုနာဂူနီကျွန်းပတ်လည်ရှိအပျက်အယွင်းများ
အဆိုပါရူကျူးကျွန်းများတွင်အတွက် Yonaguni ကျွန်း၏တောင်ပိုင်းအစွန်အဖျားမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ရာစုနှစ်တစ်ခုရှိပါတယ်, ရေငုပ်သမားသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိအဆောက်အအုံများယာဉ်၏အပျက်အစီးများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုသန္တာနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့စတုရန်းလေးထောင့-shaped ဖွဲ့စည်းပုံ, အနားနှင့်ထောင့်အဖြစ်လမ်းများ, လှေကားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Vault နှင့်အတူဧရာပလက်ဖောင်းပါဝင်သည်။ တဆိတ်ညံရာအရပ်ဟောင်းမြို့မှာယဇ်ပလ္လင်တခုကိုတူသည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အနောက်မျက်နှာမှအရှေ့ဘက်နှင့် 200 မီတာအနီးမြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်နီးပါး 140 မီတာဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုနီးပါး 26 မီတာစုစုပေါင်းမှာ။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ဒေသခံရေငုပ်သမားများသည်ဤရေအောက်မြို့တော်ကို“ ရေအောက်အပျက်အစီးများရေငုပ်သည့်နေရာ” ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမကြာခင်မှာပဲ Ryukyu တက္ကသိုလ်က“ ရေအောက်ရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေရေးအဖွဲ့” (UAET) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၈ နှစ်သုတေသနစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shihuan ကျွန်း၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများရှိပင်လယ်အောက်တွင်ကျောက်တုံးများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကျောက်တုံးများ၊ ကျောက်တိုင်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည့်ဂူကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံတစ်ခု၊ Vault နှင့်လိပ်များ၏ဂျီ ometric မေတြီရုပ်ထုများ။ အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိချက်မှာ“ အရုပ်များ” သည်ကျောက်တုံးနံရံတစ်ခုတွင်ထွင်းထုထားပြီးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကကျန်ရှိနေသော၎င်းသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောလူ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အထက်မှမြင်ရသောအပျက်အယွင်းများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းများနှင့်စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေများရှိသည်။ အကြီးမားဆုံးပျက်စီးမှုသည်အရှည်မီတာ ၁၀၀၊ အမြင့် ၂၅ မီတာ၊ gရာမကျောက်တုံးများဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Ryukyu တက္ကသိုလ်မှယူအေအီး၏အဆိုအရထိုနေရာသည်အကြီးအကဲများစုဝေးပြီးဝတ်ပြုရေးအခမ်းအနားများကျင်းပသည့်ဗိမာန်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်သည်ကိုကွန်ပျူတာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်ပုံစံကပြသခဲ့သည်။ ဗိမာန်တော်၏မြောက်ဘက်တွင်တိုင်များက ၀ န်းရံထားသည့်ဂူနှစ်ခုရှိသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များကသူတို့သည်အခမ်းအနားမတိုင်မီရေချိုးရန်နေရာဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဗိမာန်တော်၏အရှေ့ဘက်၌ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့်ကျောက်တုံးကြီးနှစ်ခုဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်လျက်ရှိ၏။ အပေါ်ဘက်တွင်ကျောက်တုံးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူလုပ်အပေါက်များပြသည်။ ကျောက်များကိုစက်များဖြင့်ပုံဖော်ထားပြီးမြို့၏အုတ်မြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်၊ ကျော်ကြားသောလစ္စနန်ယန်သည်အရှေ့တောင်ဘက်ယူနန်ဂျူနီကျွန်းတွင်ပေပေါင်းများစွာမြင့်သောလူသားခေါင်း၏ရုပ်တုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မျက်နှာအသွင်အပြင်များကိုရှင်းလင်းစွာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်headရာမလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ရုပ်တုကြီးအနီးတွင်ရုပ်ကြွင်းအုပ်စုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကရေအောက်အပျက်အယွင်းများကိုတည်ဆောက်သူများသည်အဆင့်မြင့်သောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ပါမောက္ခ Masaaki Kimura သည် Ryukyu တက္ကသိုလ်မှဘူမိဗေဒပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူက ၁၉၉၉ စက်တင်ဘာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဒီဟာတွေဟာလူလုပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများထည့်သွင်းရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားသောကျောက်တုံးများတွင်လမ်းများ၊ ညာထောင့်လှေကားများနှင့်ကျောက်တုံးတွင်းရှိလှေကားများရှိသည်။ Yonaguni ကျွန်း၏တောင်ဘက်အပျက်အယွင်းများသည်သမိုင်းမတိုင်မီကလူ့ယဉ်ကျေးမှုမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်လူ့ခေါင်း၏ရုပ်တုနှင့်ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအထူးဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင်လည်းအရေးကြီးသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရေငုပ်သမားများသည်ကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောpyရာမပိရမစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီပိရမစ်အကျယ် ၁၈၃ မီတာ၊ အမြင့် ၂၇.၄၃ မီတာ၊ ၎င်းသည်စတုဂံကျောက်တုံးများဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအဆင့် ၅ ဆင့်ရှိသည်။ အနီးအနားတွင်pyရာမပိရမစ်နှင့်ဆင်တူသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းငယ်များလည်းရှိသည်။ ထိုသို့သောသေးငယ်သောပိရမစ်ကြီးများသည်ကျောက်တုံးများဖြင့်အကျယ် ၁၀ မီတာနီးပါးရှိပြီးအမြင့် ၂ မီတာနီးပါးရှိသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့ Ryukyu တက္ကသိုလ်ကဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကဒီဟာတွေဟာလူလုပ်ဆောက်လုပ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တိုက်စားမှုကြောင့်ကျောက်ပုံတစ်ပုံရှိနိုင်တယ်၊ ထို့အပြင်ပိရမစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းကဲ့သို့သောအကြွင်းအကျန်များရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သဘာဝရလဒ်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းပြသသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှဘူမိဗေဒဆိုင်ရာရေငုပ်သူများသည်feetရာမလှေကားများကို ၃ ပေမြင့်သောကျောက်တုံးအလွှာများမှတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလှေကားများနှင့်ပိရမစ်များနှင့်တူသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအဆောက်အအုံကိုရေတိုက်စားမှုကြောင့်ပျက်စီးစေသောကျောက်တုံးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟုယူဆနိုင်သည်ဆိုသော်ငြားသဘာဝဖြစ်စဉ်မှထွက်ပေါ်လာသောကောင်းမွန်သောဖြတ်ကျော်လှေကားများ ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ပါ
တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှဘူမိဗေဒပါမောက္ခတစ် ဦး ၏အဆိုအရထိုဒေသသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ နီးပါးကနစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံနည်းကျနားလည်မှုအရလူသားများသည်စရိုက်လက္ခဏာများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုစားရန်သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပိရမစ်ကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ လူအနည်းငယ်က၎င်းသည်မသိသောယဉ်ကျေးမှုမှဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဤသို့သောအဆင့်မြင့်။ သာယာဝပြောသောယဉ်ကျေးမှုသည်အတိတ်ကာလကအမှန်တကယ်ရှိခဲ့သလောဟုတွေးမိနိုင်သည်။ ဤရေအောက်အပျက်အယွင်းများသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာတည်ရှိသလား။ အဖြေကမဟုတ်ဘူး။
ဖုန်ဟူထိုင်ဝမ်ဟောင်းရေတပ်မြို့ Hujing ၏စပ်စု Aous မြို့ရိုးကို
Penghu ကောင်တီမော်ကွန်းတိုက်ဟောင်း၏မှတ်တမ်းများအရ“ အကယ်၍ လူသည် Hujing အထက်မြင့်သောအမြင့်မှကြည့်လျှင်ပင်လယ်အောက်ရှိရိုးတံရှည်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းကို Deep Pool of ဟူဂျင်။ ” ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေငုပ်သမားများသည်နစ်မြုပ်နေသော Hujing မြို့၏နေရာအတိအကျကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါရှေးဟောင်းမြို့ရိုးကို Cross-ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ caliper တိုင်းတာညာဘက်ထောင့်မှာတိကျစွာမြောက်ဘက်-တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်-အရှေ့ကဖော်ပြသည်။ မြို့ရိုးအအဓိကအား basalt ကျောက်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ရေညှိများနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ သူကအနောက်ကနေအရှေ့အကြောင်း 160 မီတာနှင့်မြောက်မှတောင်သို့အကြောင်းကို 180 မီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအထက်ပိုင်းနှင့်၎င်း၏နိမ့်စိတျအပိုငျးခန့် 1.5 မီတာအတွက် 2.5 မီတာအကြောင်းကိုထူသည်။ တချို့ကအစိတ်အပိုင်းများသို့သော်ထိုကျောက်များအကြား interfaces အလွန်တင်းကျပ်စွာများမှာကြောင့်တိုက်စားမှုများ၏မညီမညာဖြစ်နေသောဖြစ်ကြသည်။ မြောက်ဘက်မှာတော့ dished တစ်ပတ်လည်အဆောက်အဦလည်းမရှိ။ ပြင်မြို့ရိုးအများ၏အချင်း 20 မီတာအနီးတစ်အတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုအတူနီးပါး 15 မီတာဖြစ်ပါသည်။
တချို့လူတွေကနစ်မြုပ်နေသောမြို့အမှန်တကယ်ကိုပင်လယ်ထဲသို့နစ်မြုပ် Huljing တစ်ခု extension ကိုအခါစဉ်းစားမိတယ်။ သို့သော်သုတေသနပြုဘူမိဗေဒမြို့ရိုးအကသဘာဝကျောက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုပါက, ကနဂိုအတိုင်းနှင့်တစ်အပိုင်းအစအတွက်ပါပြီမယ်လို့ညွှန်ပြ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယောက်ျား၏လက်လျှင်, သီးခြားကဏ္ဍများရှိသင့်ပါတယ်။ မြို့ရိုးအကအလွန်ရှည်လျားဖြောင့်လျှင်လည်း, အလွန်ဖြစ်ကောင်းသောသူအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ အထူးသကျောက်ခဲတို့သည်အလားတူအရွယ်အစား, ညာဘက်ထောင့်နှင့်အတူ, နှင့်ကျောက်များအကြားတစ်ဦးအပေါ်ယံပိုင်းအပေါငျးတို့သဖြစ်ကြသည်။ အလားတူပင်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွန်းဝေမျှပြားချပ်ချပ်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ interfaces နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်-shaped ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝဒီနေ့ရဲ့အဆောက်အဦစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီ။
ဂရေဟမ်ဟန့်ခ်သည်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏လုပ်ရပ်များအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၁၊ သြဂုတ်လတွင်သူနှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်ဤဒေသကိုလေ့လာရန်တရုတ်နှင့်ဂျပန်သုတေသီများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူက Sunken ရေအောက်စီးတီးရှိကျောက်တုံးများသည်သဘာဝကျောက်တုံးများနှင့်လုံးဝကွာခြားကြောင်း၊ ၎င်းသည်လူလုပ်သောဆောက်လုပ်ရေးကိုဖြစ်စေသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ သူကယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည် -“ သဘာဝကထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများကိုမပြုလုပ်ပါ၊ နစ်မြုပ်နေသောရေငုပ်သင်္ဘော Hujing ၏ကျောက်တုံးများသည်မြောက်မှတောင်သို့၊ အနောက်ဘက်မှအရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤကျောက်တုံးများတွင်ပြားချပ်ချပ်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်တင်းကျပ်စွာညှိထားသည့်အတွက်အဆစ်များကြားဓားပါးတစ်ချောင်းသာရနိုင်သည်။ Hancock ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့ဒီဟာကလူ့ဖန်တီးမှုပဲ၊
Hancock မှပြောကြားရာတွင်လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လွှမ်းမိုးထားသည့်ခိုင်မာသည့်ပုံစံရှိကြောင်း၊ သို့သော်ဤပုံစံသည်မကြာသေးမီကရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များကိုရှင်းပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သမိုင်းမတည်ဆောက်ပုံများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသနည်း။ အမှန်မှာ၊ လက်ရှိသမိုင်းသည်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများကိုရှင်းပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသူတို့ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသဲလွန်စဖြစ်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် Hujing Underwater City နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အတိတ်ကာလကလူ့ယဉ်ကျေးမှုများ၏လျှို့ဝှက်သက်သေအထောက်အထားများပါဝင်သည်။
1958 များတွင်အချို့သောအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်ဘဟားမားကျွန်းစုဝန်းကျင်ရေပိုင်နက်တွင်၎င်းတို့၏ undersea လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းထူးဆန်းအဆောက်အဦများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Construction အများအပြားမိုင်ကျော်တစ်ဖြောင့်အညီတိုးချဲ့, တိကျသောဂျီဩမေတြီပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ ဆယ်နှစ်အကြာ, ခြေရှည်လျားသောဧရာမပိတ်သောကျောက်နံရံများ, 400-500, ရှိသမျှ Meadows တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ extensions တွေကိုအဓိကမြို့ရိုးအနဲ့အတိအကျကိုညာဘက်ထောင့်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအုတ်ရိုးထက်ပို 30 စတုရန်းစင်တီမီတာ၏ဧရာမကျောက်ကိုရေးစပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပလက်ဖောင်း, လမ်းများ, ဆိပ်ကမ်းများ, တံတား, နှင့်အခြားသူများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုလုံးအပျက်အယွင်းနေတဲ့ဆိပ်ကမ်းကဲ့သို့အစီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များဘာမြူဒါတြိဂံတစ်ခုယခင်ကမသိသောကုမ္ပဏီကြီးပိရမစ်အတွက် undersea သုတေသနစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပိရမစ် 300 မီတာခြမ်းနှင့် 200 မီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ သိသာလူ့ငွေတောင်းခံလွှာသောပိရမစ်, နှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးတွင်းရှိခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေဧရာ whirlpool နှင့်အမှတ်တံဆိပ် Meadows ရေဝဲဖန်တီးသောဤတွင်းအတွင်းမှတဟုန်တည်းပြေး။ ဒါဟာအစမှေးမှိန်လာရေရဲ့မျက်နှာပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီပိရမစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အခါခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်။ ထိုပြည်ကိုပင်လယ်ထဲသို့နစ်မြုပ်တဲ့အခါသောင်းချီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ၏ကျော်ရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးသည်အစ၌ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ရေလွှမ်းမိုးမှု၊ ရေခဲခေတ်နှင့်အစရှိသည့်မရေမတွက်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယနေ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်လာသည်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ “ ရေအနီးရှိရှေးမြေကြီး” ကိုဥပမာတစ်ခုအဖြစ်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဤနေရာသည်အနက် ၂၆၀၀ အနက်ရှိပြီးဂျပန်ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ကီလိုမီတာ ၉၀ သာဝေးသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၇ မှ ၂၅ သန်းအတွင်းဂျပန်ကျွန်းအရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ခန့်တွင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအထက်သို့တက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သမိုင်းမတိုင်မီကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပထဝီအနေအထားပြောင်းလဲမှုများကရှုခင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးပင်လယ်ရေအောက်အနည်းငယ်အကြွင်းအကျန်များကိုသာထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူး။ မရ။
19eme ရာစုအကုန်မှာဗြိတိသျှဗိုလ်မှူးကြီးဂျိမ်းစ် Churchward တစ်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း၏ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ Naccal မှတ်ပုံတင်ရဖို့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ် Inde.Il အတွက်တပ်တာဝန်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဘာသာစကားမှာခဲ့ပါတယ်။ အတော်ကြာကြိုးစားပြီးပြီးနောက် Churchward နှင့်တစ်ဦးလူသိများတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြီးစွာသောသမိုင်းမယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြတယ်။ 1926 ခုနှစ်, Churchward, အမူလူ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုနောက်ဆုံးကုန်းတွင်းပိုင်းစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကမ္ပည်းအရ, Mu ကုန်းတွင်းပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိသည်ခဲ့သည်။ mu အဆင့်မြင့်စာပေခဲ့သည့်အကြီးနှင့်သာယာဝပြောရေးယဉ်ကျေးမှု, ဖြစ်ခဲ့သည်, အနုပညာ, လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်လည်းစက်ယန္တရားတီထွင်ခဲ့သူ။ အဲဒီအခြိနျမှာပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အံ့သြစရာကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ရပြီးဧရာမအဆောက်အဦးများ, ပိရမစ်, ကျောက်အထိမ်းအမှတ, ရဲတိုက်များနှင့်လမ်းများတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာကျောက်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့သပ်ရပ်လမ်းများနှင့်ချန်နယ်များမြို့တော်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားမြို့ကြီးတွေမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ အားလုံးနံရံထွန်းလင်းရွှေနှင့်အလှဆင်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့ခမ်းနားထည်ဝါစွာဘဝအသက်ရှင်။ , Mu ကုန်းတွင်းပိုင်း၏မြို့သားကောင်းသောပင်လယ်ရေကြောင်းပြခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အပေါငျးတို့သမုဒ်ဒရာခရီးထွက်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကတောင်အစွမ်းထက်ကိုလိုနီအင်ပါယာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာ, အ Mu ကုန်းတွင်းပိုင်းကမ္ဘာတွင်ယဉ်ကျေးမှု၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေး "ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်သာယာဝပြောတဲ့ Mu ကုန်းတွင်းပိုင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူတို့ဟာသူရုတ်တရက်ကပ်ဆိုးကြီးအပြီးရေအောက်တွင်လွှမ်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖြစ်ဆိုးအကြမ်းဖက်ငလျင်နှင့်ဟာရီကိန်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးတောင်ချော်ရည်အားကောင်းတဲ့ငလျင်နှင့်အတူ coupled, များစွာ ထွက်. ။ မြေကြီးတပြင်လှိုင်းတံပိုးများနှင့်မီးကဲ့သို့ချီလွှဲခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာမီးခိုးမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်ပြည့်၏။ အရာအားလုံး Cube အစုတခုနဲ့တူပြိုကျ, ချက်ခြင်းချော်ရည်များနှင့်ပင်လယ်ရေဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ မည်သည့်သတိပေးမရှိရင်တစ်ခုလုံးကိုကုန်းတွင်းပိုင်း Mu ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိဆင်းကြလေ၏။
ရေအောက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများသည်သမိုင်းမတိုင်မီကလူ့ယဉ်ကျေးမှုများတည်ရှိကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာသက်သေထူသည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုဖတ်စာအုပ်များတွင်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ခေတ်သစ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များသည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောသီအိုရီများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်လက်ရှိသမိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုမေးခွန်းမထုတ်လိုကြပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်မှာမနုropဗေဒပညာရှင်များနှင့်သမိုင်းပညာရှင်တို့သည်မိမိတို့၏ဝယ်ယူထားသောအယူအဆများကို ပြောင်းလဲ၍ သမိုင်းဆိုင်ရာအမှန်တရားများကိုလက်ခံရန်အချိန်ကာလတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
SOURCE မှ: http://www.mysteredumonde.com/article/Yonaguni-Les-preuves-dune-civilisation-engloutie-il-y-a-12-000-ans-_4426.html
Mu - ဆုံးရှုံးသွားသောတိုက်ကြီး
€ 1 မှအသစ် 13,49
€ 13,49 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ 24, 2020 4:32 pm တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ခံစားမှုများ - Jerry နှင့် Esther Hicks (အသံ)